www.camaloow.com - News: Muwaadin Soomaaliyeed oo la soo taagay Maxkamad Maraykanka ku taallo oo. ...................................
December 10 2018 04:40:37
Muwaadin Soomaaliyeed oo la soo taagay Maxkamad Maraykanka ku taallo oo. ...................................
<?php </a> Maxkamad ku taala dalka Maraykanka ayaa ninkii 11 aad oo Soomaali Maraykan ah kana soo jeeda Magaalada Minneapolis ku eedeeysay in uu gacan saar weyn la leeyahay Ururka Daacish ee ka dagaalamaya Dalalka Syria iyo Ciraaq.
Maxamed Amiin Rooble ayaa sida Maxkamaddu ay sheegtay in weli la rumeysan yahay in uu ka barbar dagaalamayo Ururka Daacish ee dalka Syria kadib baaritaano ay sameeyeen Ciidamada Sirdoonka ee dalkaas.
Dukomentiyo ay soo bandhigtay Maxkamadda Magaalada Minneapolis ayaa lagu sheegay in mr Rooble uu isticmaalay lacago loo ururiye Buundo ku taalla Magaaladaasi oo burburty Sanadkii 2007 iyadoo lacagahaasi qaybo ka mid ahna uu u adeegsaday in uu ugu safro Magaalada Istanbul ee dalka Turkey-ga sanadkii 2014.
Maxkamadda Federaalka ah ayaa xustay in Rooble uu soo bandhigayey Sawirro muujinaya Colaadaha Syria oo uu soo qaaday iyadoo uusan dib ugu soo laaban Dalka Maraykanka.
Waalidiinta Ninkaas Soomaali Maraykanka ah ayaa sheegay in wiilkooda uu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay Buundadii burburtay ee Magaalada Minneapolis,kadibna lacago magdhaw ah oo la siiyey uu ku galay safarkii uu ka tegay dalka Syria 10 beri kadib markii lacagtaasi ay ku dhacday Akoonkiisa.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu Maxkamadeeyay dalka Maraykanka kuwaasoo lagu eedeeyay in ay taageero siiyaan Ururka Daacish halka kuwo kale la sheegay in ay ku biireen Ururkaasi ayna gaareen Dalka Syria.
· xassan on August 25 2016 · 0 Comments · 59016 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,901,446 unique visits